जिल्लावासीको जनमत नबुझेर ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार ! | Hakahaki
जिल्लावासीको जनमत नबुझेर ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार !
१५ मंसिर, काठमाडौं । मधेशवादी दल असन्तुष्ट दल र केही नेतालाई खुसी पार्न केही मान्छेको उक्साहटमा जिल्लावासीको जनमत नबुझेर सरकारले सिमाङ्कन हेरफेरसहित पास गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई जनताले अनुमोदन होइन, अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले सिमाङ्कन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक पास गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । उक्त संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित भए प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुम प्रदेश नम्बर ४ मा जाने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।
तर, संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा बुधबार बिहानैदेखि दाङ, प्यूठान, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रुपन्देही, नवलपरासी, गुल्मी र पाल्पा जिल्लामा आन्दोलन चर्किएको छ ।
सिमाङ्कन हेरफेरको विरोधमा बुधबार प्यूठान बन्द गरिएको थियो । यसैक्रममा ब्यक्तिगत कामको सिलसिलामा गृह-जिल्ला रोल्पा पुगेका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा प्यूठान बन्द भएका कारण पुनःरोल्पातिरै फर्किन बाध्य भए । ५ नम्बर प्रदेशमा रहेको प्यूठानलाई संशोधनमार्फत् ४ नम्बर प्रदेशमा गाभिएपछि प्यूठानबासीले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गरेका हुन् ।
यसैगरी सिमाङ्कन हेरफेरको विरोधमा बुधबार रोल्पालीहरुले सदरमुकाम लिवाङमा मोटरसाइकल र्‍याली निकाले । संशोधित सिमाङ्कनको विरोधमा बिहीबार रोल्पा र प्यूठानको सीमा क्षेत्र चतुर्भूजमा दुबै जिल्लाको संयुक्त जनसभा गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको विरोधमा गुल्मीमा अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरिएको छ । बन्दमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायत सबै दलहरुले समर्थन जनाएका छन् । गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा तम्घासमा भएको सर्वपक्षीय भेलाले अनिश्चितकालीन जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको छ ।
पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राइएको विरोधमा तराईका दाङ, रुपन्देही र नवलपरासी पनि आन्दोलित भएका छन् । एमाले निकट युवा संघको अगुवाइमा दाङमा बुधबार बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्मएक घण्टा चक्काजाम गरिएको थियो ।
एमाले निकट अनेरास्ववियुले रुपन्देहीको बुटवलमा प्रदर्शन गर्दै चक्काजाम गरेको छ । चक्काजामका कारण बुधबार दिनभर गाडीहरु चल्न सकेनन् । उनीहरुले सडकमा टायर समेत बाले ।
संशोधन प्रस्तावको विरोधमा नवलपरासीका बर्दघाट, सुनवल, भुमही लगायतका स्थानमा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग ठप्प भएको थियो ।
काठमाडौंमा एमाले निकट युवा संघ र अनेरास्ववियुले टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिए भने सडकमा टायर बालेर यातायात अवरुद्ध पारे । उनीहरुले संविधानको संशोधन विधेयकसमेत जलाएका थिए ।
माओवादी केन्द्रको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता रायमाझी बीच चर्काचर्की
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का एक पोलिटब्यूरो सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा हाकाहाकी डटकमलाई दिएको जानकारी अनुसार नेता टोपबहादर रायमाझीले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विद्येयक पास हुन नदिने भनी बैठकमा कुरा उठाएका छन् ।
पार्टीको मंगलबार बसेको पोलिटव्युरो वैठकमा सुरुमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव गरेपछि टोपबहादुर रायमाझीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै रायमाझीले बाहिर देखाउनका लागि मात्रै संविधान संशोधनमा पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनको चर्चा गरेको भए आफु केही नभन्ने तर वास्तविक तयारी गरेको भए जनताले जवाफ दिने बताएका थिए ।
पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउनु अघि पोलिटव्युरो वैठकमा प्रचण्ड र रायमाझी बिच भएको कुराकानीको न्युजसेवाले प्राप्त गरेको गोप्य अडियो टेपमा प्रचण्ड र टोपबहादुर मात्रै बोलेका छन् । ५० मिनेट लामो अडियो prachanda-vs-top-bdr-rayamajhi मा सुरुमा प्रचण्ड बोलेका छन् ।
केही दिन अघिमात्रै माओवादी केन्द्रका एक हेडक्वाटर सदस्यले एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा टोपबहादुर रायमाझीले बैठकमा प्रदेश टुक्रयाउन सहमति जनाएको तर बाहिर अर्कै कुरा गरेको भनी बताएका थिए ।
स्रोतकाअनुसार माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी एमालेमा जाने प्रचार उनलाई कमजोर बनाउन गरिएको प्रायोजित षड्यन्त्र मात्रै हो ।